Home » Lahatsoratra farany farany » Divay & Fanahy » Divay frantsay: Ny famokarana ratsy indrindra hatramin'ny 1970
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Vaovao farany Brezila • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Divay & Fanahy
Nahoana no mividy divay frantsay izao fa tsy rahampitso
Lazaina amin'ny haitraitra i Frantsa ary tafiditra ao anatin'io filaharana io ny divay. Mamokatra eo amin'ny 16 isan-jaton'ny divay maneran-tany ny firenena ary mampiasa olona maherin'ny 142,000 eo amin'ny sehatry ny fambolena divay fotsiny.
Ny fikarohana Reuters dia nanapa-kevitra fa ny divay frantsay Ny famokarana indostrialy dia mety hidina 30 isan-jato eo ho eo amin'ity taona ity, raha oharina amin'ny taona teo aloha, ka ny taona 2021 no taona ratsy indrindra hatramin'ny 1970 ary mety ho taona ratsy indrindra voarakitra an-tsoratra.
Ny anton'ity vaovao ratsy ity dia nahitana fanala amin'ny volana aprily, korontana Covid 19, ady ara-barotra nataon'ny filoha Trump mikendry ny divay frantsay, tondra-drano amin'ny fahavaratra miaraka amin'ny mari-pana ambony izay miteraka holatra amin'ny voaloboka izay nanimba ny ankamaroan'ny vokatra.
Ireo tia divay dia tokony haka ny divay frantsay IZAO ho fanomanana ny fotoam-pialan-tsasatra ary hiezaka ny hisoroka ny fiakaran'ny vidin'ny vola.
Sancerre dia eo amin'ny sisiny atsinanan'ny faritry ny tanimboaloboka lehibe ao amin'ny Lohasahan'i Loire ary akaiky kokoa ny Cote d'Or any Bourgogne noho ny any amin'ireo distrikan'ny divay manan-danja hafa ao Anjou sy Touraine ao Loire. Mandrakotra havoana mihodinkodina mirefy 15 milimetatra eo amin'ny morony andrefan'ny Loire ny faritry ny fambolena voaloboka miaraka amin'ny voaloboka mirefy 7000 hektara natokana hamokarana divay an'ilay anarana.
Ny karazana tany dia mizara ho fizarana telo: tsaoka, vatosokay-bato ary silex (vato). Matetika ny Flint dia nomena anarana ho an'ny fofon'ny setroka pierre a fusil (gunflint) ary ny anton'ny solon'anarana Sauvignon Blanc Fume.
Sancerre dia malaza amin'ny divay fotsy mamy sy mamy vita amin'ny Sauvignon Blanc. Ny Sancerre mahazatra dia fotsy, misy asidra matanjaka miaraka amin'ny naoty gooseberries, bozaka, harato ary mineraly vato. Nofafan'ny Phylloxera ny tanimboaloboka midadasika tamin'ny tapaky ny taonjato faha-19 ka nanimba ny lalan'ny karazana divay mena toy ny Gamay sy Pinot Noir. Nambolena tao Sauvignon Blanc ny tanimboaloboka ary nahazo sata AOC ny faritra tamin'ny 1936.
Ny 2020 Domaine Girard Sancerre. Notes. 100% Sauvignon Blanc. Domaine Fernand Girard dia tarihin'i Alain Girard, manaraka ny dian'ireo taranaka mpamboly divay ao amin'ny tanànan'i Chaudoux, any amin'ny kilaometatra vitsivitsy avaratrandrefan'i Sancerre sy avaratr'i Cavignol. Mirefy 14 hektara ny tanimboaloboka ary mivarotra cuvees amin'ireo mpanelanelana i Girard ary manodina manokana ny ampahany amin'ny fitambaran'ny vokatra amin'ny anaran'ny fianakaviany. Avy amin'ny tanimboaloboka mirefy 2.5 hektara eo amin'ny hantsana mideza miantsinanana miaraka amin'ny tany vatosokay be vato ny lakandrano La Garenne. Ny tany sokay dia manatsara ny toetran'ny flinty, mineraly ary maitso maitso an'ny Sauvignon Blanc.
Ny trano dia mampiasa teknolojia maoderina izay misy milina fanontam-pirinty pneumatic, vata vy tsy misy pentina, rafitra fanaraha-maso ny mari-pana mandritra ny fermentation ary toerana misy rivotra ho an'ny fahanterana ao anaty tavoahangy sy tavoahangy. Na dia amin'ny taonjato faha-21 aza ny teknolojia, ny fomba nentim-paharazana dia ampiasaina ao amin'ny tanimboaloboka izay ampiasaina kely ny herbicides sy ny fitsaboana, ary ny masirasira ara-barotra dia tsy ampidirina amin'ny fampidiran-dra na manampy tsiro. Ny vokatra dia Sancerre izay manolotra fofona mahafinaritra, miaraka amin'ny asidra vaovao miaraka amin'ny astringency ambany.
Alain Girard - Sary avy amin'i Noah Oldham
Valisoa volamena mavo mavo ny maso ary ny orona dia mahita zava-manitra, hodi-boasary makirana, ahitra maitso vaovao, paoma maitso, sombin-tsigara ary flint. Mifanaraka tsara amin'ny trondro fotsy fisaka amin'ny saosy caper fa mijoro irery miaraka amin'ny tanjaka sy fahamendrehana.
Vakio eto ny Fizarana voalohany: Mianara momba ny divay ao amin'ny Lohasahan'i Loire amin'ny alahady NYC
Bryce Baker hoy:
November 24, 2021 amin'ny 12: 49
Ny iray hafa dia "fahadisoan'i Trump izany."
Ny saran-dàlana amerikana dia valin'ny famatsiam-bola tsy ara-drariny ataon'ny EU amin'ny Airbus, araka ny nomarihin'ny WTO. Ny karama dia natao hitondra fitoniana amin'ny varotra US-EU. Mety hanampy ny milaza ny tantara manontolo ary miala amin'ny fanomezan-tsiny an'i Trump.